လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ကို အယုံအကြည်မရှိဆိုကာ တိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦး နုတ်ထွက်စာတင် | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ - Open Hluttaw
လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ကို အယုံအကြည်မရှိဆိုကာ တိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦး နုတ်ထွက်စာတင် | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Posted on September 4, 2018 October 1, 2018 by Open Hluttaw
ဝါးခယ်မမြို့နယ် အမှတ် (၂)မဲဆန္ဒနယ် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်းက လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ကို အယုံအကြည်မရှိ ဆိုကာ လွှတ်တော်သို့ နုတ်ထွက်စာတင်သည့်အပေါ် လက်မခံသေး ကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်ခိုင်က ပြော ကြားသည်။
— Read on www.7daydaily.com/story/134823
This entry was posted in GeneralChooseahluttaw sessionHluttaw NewsChooseahluttaw sessionRegion/State Hluttaw. Bookmark the permalink.
← မန္တလေးမြို့တွင် ဓားခုတ်လုယက်မှု အပါအဝင် မှုခင်းများ ဖြစ်ပွားနေမှုအပေါ် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ မေးမြန်းသွားရန် စီစဉ်နေပြီး သိမ်းငှက်စစ်ဆင်ရေးစီမံချက် မအောင်မြင်ဟု တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဝေဖန် – Eleven Media Group
ဌာနများတွင် ဖောင်းပွနေသည့် ရာထူးများကို လျှော့ချရန်နှင့် ယခင်အစိုးရလက်ကျန် မာစီဒီးကားများကို ခွဲ ဝေမယူဘဲ လေလံတင်ရောင်းချခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတွင်ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှုကို လျှော့ချသင့်ကြောင်း လွှတ်တော်၌ ဆွေးနွေး | The Myanmar Times →